म गोविन्द केसी को पक्षमा : बाबुराम
अख्तियार प्रमुख डा. लोकमानसिंह कार्कीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै आमरण अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीको पक्षमा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पनि समर्थन जनाएका छन् । डा. केसीको अभियानको पक्षमा मंगलबार बृहत सञ्जाल गठन भएको छ र त्यसमा डा. भट्टराई पनि आबद्ध भएका छन् । विभिन्न राननीतिक दल, विद्यार्थी संगठन, नागरिक सञ्जाल र अभियन्ताहरुको भेलाले ‘सोलिडारिटी फर डा. गोविन्द केसी एलायन्स’ गठन गरेको छ ।
डा. जीवन क्षेत्रीले संयोजन गरेको भेलामा नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई, विवेकशील नेपाली दलका उज्जल थापा, अनेस्ववियु क्रान्तिकारीका राम नेपाली, नेपाल रेजिडेन्ट डक्टर्स सएशोसिएन, नेपाल मेडिकल स्टुडेन्ट सोसाइटी लगायतका सहभागी थिए । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भेला आयोजना गरिएको थियो । भेलाले साउन ८ गते माइतीघर मण्डलाबाट नयाँबानेश्वरसम्म केसीको पक्षमा बृहत प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त प्रदर्शनमा डा. भट्टराई पनि सहभागी हुन्छन् की हुँदैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. केसीले चिकित्सा क्षेत्रका विकृति अन्त्य गर्न र अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाएर पदबाट हटाउन माग गरेका छन् ।
शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भेला आयोजना गरिएको थियो । भेलाले साउन ८ गते माइतीघर मण्डलाबाट नयाँबानेश्वरसम्म केसीको पक्षमा बृहत प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अख्तियार प्रमुख कार्कीले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिएको डा. केसीको आरोप छ ।
डा. गोविन्द केसीले विज्ञप्ति जारीगर्दै भने, कुनै स्वास्थ्य जाँच गर्दिन, औषधि पनि लिन्न
डा. गोविन्द केसी काठमाडौं आइपुगे
पहिलो समाचारमोदी परे टप टेन अपराधिको सूचीमा अर्को समाचारओली हटाउने निर्णयप्रति घोर आपत्ति : सुजाता